Ciidamada dowladda Puntland oo dib ula wareegay deegaanka Af-urur iyo Axmed Karaash oo gaary – Radio Daljir
Ciidamada dowladda Puntland oo dib ula wareegay deegaanka Af-urur iyo Axmed Karaash oo gaary
Juunyo 11, 2019 12:29 g 0
Ciidamada daraawshta ee dowladda Puntland ayaa maanta dib ula wareegay deegaanka Af-urur ee gobolka Bari kadib markii dhawaan malashiyaadka Al-shabaab ay deegaanka qabsadeen iyadoo aysan wax dagaal ah ka dhicin.
Al-shabaab ayaa ka war helay in ay kau soo wajahan yihiin ciidamada Puntland waxayna durbadiiba isga baxeen deegaanka.
Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland, Axmed Karaash ayaa tagay deegaanka Af-urur ee gobolka Bari,wuxuuna ciidamada kula dardaarmay in ay cadowga dalkooda ka difaacaan dowladduna ay siin doonto xuquuqdooda.
Dowladda Puntland ayaa sheegtay in mamaulka Soomaaliland ee Soomaalidiidka ah in Argagixisada Al-shabaab ay taageero dhaqaali ku siiyaan sidii Puntland amnigeeda loo loo wax yeelayn lahaa .
warkan oo faah faah faahsan kala sococo Daljir.com.
Mashruuc weyn oo laga hirgaliyeey Garoowe (Daawo)